- အရောင်တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ စိတ်အရောင်။ စိတ်အရောင်ဆိုတာ မရှိဘူး။ စိတ်ကို မမြင်ဘူးကြလို့လည်း စိတ်အရောင်ကို မသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြတာပဲ။ သီးသီးသန့်သန့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရောင်မရှိတဲ့စိတ်ဟာ သိတတ်တဲ့ သဘောရှိတာကိုတော့ လူတိုင်းက လက်ခံထားကြတယ်။ အရောင်မရှိတဲ့စိတ်ကို အသိနဲ့သတိနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရင်တော့ ဒုက္ခရောင်စုံထဲက လွတ်မြောက်နိုင်တယ်။
အရစ် အလိမ် အကွေ့အကောက်များသောစိတ်
- တန်ဖိုးမရှိတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။ (ဥပမာ - ကွမ်းစားတဲ့စိတ်မျိုး။ ကွမ်းစားရင် ထွက်လာတဲ့ ကွမ်းရည်ဟာမျိုချလို့ မရဘူး။ အရည်ရော အဖတ်ရော အကုန်လုံး ထွေးထုတ်ပစ်ရတယ်။ ပါးစပ်တွေလည်း ညစ်ပတ်တယ်။ သွားတွေလည်း ညစ်ပတ်တယ်။ ကွမ်းဝါးနေတာကလွဲရင် ဘာအကျိုးမှမရတဲ့ ကွမ်းစားစိတ်။)
- မိမိရဲ့ စိတ်အရည်အချင်း ပြည့်စုံမှုရှိ၊ မရှိ။ အောက်ပါမေးခွန်းတွေ ဖြေကြည့်ပါ။
အမြင်တွေ၊ အယူအဆတွေ စင်ကြယ်ရဲ့လား?
ယုံမှားနေတာတွေ လုံးဝပျောက်ပျက် ကင်းရှင်းစင်ကြယ်ရဲ့လား?
အမှန်နဲ့အမှားကို ခွဲခြားပြီးသိတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိမြင်မှု စင်ကြယ်ရဲ့လား?
အမှန်ကိုသိတဲ့ ဉာဏ်ကရော စင်ကြယ်ရဲ့လား?
ဉာဏ်နဲ့ မဂ်ကို သိမြင်ရောက်ရှိနေလို့ စိတ်က စင်ကြယ်ရဲ့လား?
- စိတ်ပျက်စီးမှုမရှိအောင် အသိနဲ့သတိစိတ်က ကာကွယ်ပေးထားလို့ ယိမ်းယိုင်ပြောင်းရွှေ့မှု မရှိတော့ဘဲ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- လုံးဝတန်ဖိုးထားထားတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ။ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အနေအထား၊ အပျက်အစီး မဖြစ်အောင်၊ အတိမ်းအစောင်း မဖြစ်အောင်၊ အမှားအယွင်း မဖြစ်အောင် သတိနဲ့ ဂရုစိုက်နေတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- နည်းနည်းပြောရုံနဲ့ များများသိတဲ့ စိတ်အဆင့်။
- မျှော်လင့်မှုပေါင်းများစွာ ထားထားတဲ့ အရာတစ်ခုကို ဆုံးရှုံး စွန့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ အောက်ဆုံးအဆင့်ထိ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ စိတ်အနေအထား။
- တမင်ရည်ရွယ်ပြီး ကလန်ကဆန်လုပ်တဲ့စိတ်။ အများသဘောတူညီမှုကို မလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ ကန့်လန့်လုပ်တဲ့စိတ်။